Cibaadada, Kaniisada Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Cibaadadu waa jawaabta rabbaaniga ah ee ammaanta Ilaah. Waxa lagu kiciyaa jacaylka rabaani ah waxayna ka soo baxdaa is-muujinta rabbaani ah ee abuuristiisa. Cibaadada, rumaystahu wuxuu galayaa wada xiriirka lala yeesho Ilaaha Aabbaha ah xagga Ciise Masiix, oo lagu dhex dhexaadiyo Ruuxa Quduuska ah. Cibaadadu waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaad siiso is-hoosaysiin iyo farxad farxad leh Ilaah wax kasta. Waxay isu muujisaa dabeecadaha iyo ficillada sida: salaadda, ammaanta, dabaaldegga, deeqsinimada, naxariista firfircoon, toobadda. (Yooxanaa 4,23; 1 Yooxanaa 4,19; Filiboy 2,5-11; 1 Butros 2,9-10; Efesos 5,18-20; Kolosay 3,16-17; Rooma 5,8-11; 12,1; Cibraaniyada 12,28; 13,15-16)
Eebbe uga jawaab cibaadada
Waxaan kaga jawaabnaa Ilaah cibaadada maxaa yeelay cibaadada ayaa si fudud Ilaahay u siisa waxa ku habboon isaga. Waxay mudan tahay in la amaano.
Ilaah waa jacayl iyo wax kasta oo uu sameeyo, wuxuu ku sameeyaa jacayl. Taasi waa sharaf. Xitaa waxaan ku faanaa jacaylka heer aadane, miyaanay ahayn? Waxaan amaaneynaa dadka naftooda u huray inay dad kale caawiyaan. Ma aysan helin awood ku filan oo ay ku badbaadiyaan noloshooda, laakiin waxay u adeegsadeen awooddii ay ku caawin lahaayeen kuwa kale - taasi waa wax lagu amaano. Taa bedelkeeda, waxaan dhalleeceeynaa dadka awood u leh inay caawiyaan laakiin diiday inay caawiyaan. Naxariistu waa ka ammaan badan yihiin xoogga, oo Ilaahna waa ka wanaagsan oo xoog badan.
Ammaanku wuxuu sii xoojinayaa xidhiidhka jacaylka ka dhexeeya innaga iyo Ilaah. Jacaylka Ilaah noo qabo waligiis yarayn maayo, laakiin jacaylka aannu u qabno isaga ayaa marar badan yaraanaya. Mahad baan ku xasuusan doonaa jacaylkiisa uu inoo qabo oo waxaan u shidaynaa dabka jacaylka ah ee Ruuxa Quduuska ahi inagu shubay. Way fiicantahay in la xasuusto oo lagu dhaqmo sida uu Ilaahay cajiibka u yahay, maxaa yeelay kani wuxuu nagu xoojiyaa Masiixa oo wuxuu kordhiyaa dhiirigelinta aan isaga la mid nahay wanaaggiisa, taas oo kordhinaysa farxaddeena.
Waxaa naloo sameeyay ujeeddada ah inaan Ilaah ku ammaano (1 Butros 2,9) in isaga loo keeno ammaano iyo ammaan, oo inbadan oo aan Ilaah la joogno, farxaddeena ayaa sii weynaan doonta. Noloshu waa mid aad u sii farxad badan haddii aan sameyno wixii nalagu abuuray inaan sameyno: inaan Allah sharfo. Tan waxaan ku sameyneynaa oo keliya cibaadada, laakiin sidoo kale habka loo maro noloshayada.
Cibaadadu waa hab nololeed. Waxaan ku allabari jirkeena iyo maskaxdeena ilaahay (Rooma 12,1-2). Waxaan caabudaynaa Ilaah markii aan injiilka la wadaagno dadka kale (Rooma 15,16). Waxaan caabudaynaa Ilaah markii aan sameyno allabaryo maaliyadeed (Filiboy 4,18). Waxaan caabudaynaa Ilaah markii aan caawinno dadka kale (Cibraaniyada 13,16). Waxaan cadeyneynaa inuu mudan yahay, inuu ku habboon yahay waqtigeenna, tixgelinno iyo daacadnimo. Waxaan ku ammaaneynaa ammaantiisa iyo is-hoosaysiinta anagoo ah mid inaga mid ah aawadeenna awgeed. Waxaan ku ammaanaynaa xaqnimadiisa iyo nimcadiisa. Waxaan ku ammaaneynaa sida uu run ahaantii yahay.
Taasina waa sababta uu isagu noo abuuray - in aannu ammaano ammaanta. Waa sax in aynu ammaano kan na abuuray, kan dhintay oo haddana u sara kacay si uu noogu badbaadiyo oo uu noo siiyo nolosha weligeed ah, kan weli shaqeeya kan ina caawiya, isaga. si aad u noqotid mid lamid ah. Waxaan ku leennahay daacadnimo iyo daacadnimo, waxaan leennahay jacaylkeenna.
Waxaa naloo sameeyay inaan Ilaah ammaano oo weligeen sidaas yeeli doonno. Yooxanaa waxaa loosiiyay wax mustaqbal ah: «uun kasta oo jannada ku jira, iyo dhulka iyo waxyaalaha dhulka ka hooseeya, iyo badda iyo waxa ku jira oo dhan, waxaan maqlay iyagoo leh, kan carshiga ku fadhiya iyo kan kalaba, Wanku waa ammaan iyo maamuus iyo ammaan iyo xoog iyo rabsho weligiis weligiis iyo weligiis! (Muujintii 5,13). Tani waa jawaabta saxda ah: maamuusida kuwa mudan in la ixtiraamo, maamuuska kuwa sharafta leh, daacadnimada kuwa aaminka ah.
Shanta mabda 'ee cibaadada
Sabuurradii 33,1: 3 waxaan akhrinaa: “Kuwiinna xaqa ahow, Rabbiga reyreeya, Kuwa cibaadalaawayaasha ahu si qumman ayay isaga ku ammaani doonaan. Rabbiga ugu mahad naqa kataarad, Isaga u ammaana Sabuurrada toban xadhig leh. Gabay cusub isaga ugu gabya; si qurux badan ayey ugu ciyaaraysaa xargaha leh cod faraxsan! » Qorniinku wuxuu ina farayaa inaan Rabbiga gabay cusub ugu gabno, oo farxad la reyno, oo looxyo ka dhawaajiyo, muusikada muusikada, taashashka garaacda, iyo suxuunta laysku halleeyo, oo xataa lagu caabudo qoob ka ciyaarka (Sabuurradii 149: 150). Sawirku waa mid farxad leh, farxad aan la xakamayn karin, farxad lagu muujiyo caqabado la'aan.
Baybalku wuxuu ina siinayaa tusaalooyin cibaado kadhan ah. Waxay sidoo kale na siisaa tusaalooyin ka mid ah qaababka cibaadada ee rasmiga ah, oo leh tallaabooyin isdaba joog ah oo ku-meel-gaar ahaa oo sii ahaanaya isla qarniyo. Labada noocba cibaadada waxay noqon karaan kuwo la caddeyn karo, midna ma sheegan karo inuu yahay dariiqa keliya ee saxda ah ee lagu ammaano Ilaah. Waxaan jecelahay inaan ku celiyo qodobbada guud ee la xidhiidha cibaadada.
1. Waxaa naloogu yeeray cibaadada
Marka hore, Ilaahay wuxuu inaga doonayaa inaan caabudno. Tani waa mid joogto ah oo aan aragno bilowga ilaa dhamaadka Qorniinku (Bilowgii 1: 4,4; Yooxanaa 4,23:22,9; Muujintii). Cibaadadu waa mid ka mid ah sababaha naloogu yeedhay: in lagu dhawaaqo camalkiisa sharafta leh (1 Butros 2,9). Dadka Ilaahay kaliya ma jecla oo addeeca isaga, laakiin sidoo kale waxay ku dhaqmaan ficillo cibaado gaar ah. Waxay allabari ku bixiyaan allabari, oo ammaan bay ku gabyaan, oo tukadaan.
Qorniinka waxaan ku aragnaa noocyo fara badan oo cibaadooyin ah. Faahfaahin badan ayaa lagu qoray sharciga Muuse. Dadka qaar ayaa loo qabtay hawlo qaarkood waqtiyo gaar ah meelo cayiman. Cidda, maxay tahay, goorma, halkee iyo sidee ayaa si faahfaahsan loogu qeexay. Taa bedelkeeda, Bilowgii 1 waxaan ku aragnaa sharciyo aad u yar oo ku saabsan sida ay awoowayaashu caabudayeen. Iyagu ma lahayn wadaad wadaad magacaabay, oo kuma koobnayn meel cayiman, oo wax yar baa loo sheegay wixii la bixin lahaa iyo goorta la sadqeeyo.
Mar labaad Axdiga Cusub waxaan wax yar ka aragnaa sida iyo goorta la caabudo. Falalka cibaadada kuma eka koox ama goob gaar ah. Masiixu wuxuu tirtiray shuruudaha iyo xadidaada Muuse. Dhammaan rumaystayaasha ayaa wadaaddada ah oo had iyo goor naftooda u bixiya sida allabaryo nool.
2. Ilaah kaliya waa in la caabudo
In kasta oo ay jiraan noocyada kala duwan ee cibaadada, haddana hal si joogto ah ayaa u mareysa Qorniinka oo dhan: Waa in Ilaah la caabudo oo keliya. Cibaadadu waa inay noqotaa mid gaar ah haddii la doonayo. Ilaah wuxuu inaga doonayaa jacaylkeenna oo dhan, dhammaanteenna daacadnimadayada. Ma u adeegi karno laba ilaah. In kastoo aan u adeegsanno dariiqooyin kaladuwan, midnimadeena waxay ku saleysan tahay xaqiiqada in isagu yahay kan aan caabudno.
Israa’iil qadiimka, ilaah la tartamayay badanaa wuxuu ahaa Bacal. Waqtigii ciise waxay ahayd caadooyin diimeed, is-xaqdarro iyo munaafaqnimo. Runtii, wax kasta oo inaga dhexeeya innaga iyo Ilaah - wax kasta oo innaga dhigaya inaannu caasinno - waa ilaah been ah, sanam caabudaan. Dadka qaar maanta waa lacag. Dadka kale, waa jinsi. Qaar waxay leeyihiin dhibaato weyn oo kibir ama ka walwalsan waxa dadka kale ay ka fikiri karaan. John wuxuu sheegayaa qaar ka mid ah ilaahyada beenta ah ee caanka ah markuu qoro:
Ha jeclaan adduunka ama waxa dunida ku jira. Haddii qof dunida jeclaado, taasi ma aha jacaylka aabbaha. Maxaa yeelay, wax kasta oo dunida ku jira, hilib damaca iyo indhaha ayaa damac iyo nolol rajo leh, xagga kama aha aabbaha, laakiin waa xagga dunida. Duniduna waxay ku gudubtaa damaceeda; laakiin ku alla kii yeela doonista Ilaah weligiis wuu sii jirayaa » (1 Yooxanaa 2,15: 17).
Si kasta oo ay tabar noogu jirto, waa inaan iskutallaabta ku qodnaa, dilno, waa inaan ka takhalusnaa dhammaan ilaahyada beenta ah. Haddii ay jiraan wax inaga horjoogsada inaan addeecno Ilaah, waa inaan ka takhalusnaa. Ilaahay wuxuu rabaa dadka inay caabudaan isaga kaligiis.
Saddexaad ee joogtada ah ee ku saabsan cibaadada aan ku aragno Qorniinka waa in cibaadadu ay noqotaa mid daacad ah. Faa'iido malahan wax u sameynta sida caadiga ah, loo heesida heesaha saxda ah, isu imaatinka maalmaha saxda ah, adoo dhahaya ereyada saxda ah haddii aan dhab ahaantii aan qalbigeenna Ilaah ku jeclaanin. Ciise wuxuu dhalleeceeyay kuwa Ilaah ku ammaana bushimahooda bushimahooda, laakiin kuwa isaga caabudayay si aan micne lahayn maxaa yeelay qalbiyadoodu Ilaah uma dhowaan. Caadooyinkaaga (oo markii hore loogu talagalay in lagu muujiyo jacaylkooda iyo cibaadadooda) waxay noqdeen caqabado jacaylka iyo cibaadada dhabta ah.
Ciise wuxuu sidoo kale carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo daacadnimo markuu yiraahdo waa inaan ku caabudno ruuxa iyo runta (Yooxanaa 4,24). Markaan nidhaahno waan jeclahay Ilaah laakiin runti waxaan uga xanaaqnaa awaamiirtiisa, waxaan nahay munaafiqiin. Haddii aan u qiimeyno xorriyaddayada wax ka sarreeya awooddiisa, dhab ahaan caabudin mayno. Isagu axdigiisa geli mayno afkiisana erayadiisa gadaashiisa kuma tuuri karno (Sabuurradii 50,16: 17). Kuguma yeeri karno Sayidkiisa mana iska indhatiri karno waxa uu leeyahay.
Kitaabka oo dhan, waxaan ku aragnaa in cibaadada runta ah ay kujirto addeecitaan. Addeecidani waa inay kujirtaa ereyada Eebbe ee ku saabsan sida aan midkeenba midka kale ula dhaqanno.
Annagu kuma sharfi karno Ilaah haddii carruurtiisa aannu maamuusnayn. «Markii qof dhaho: Waxaan jeclahay Ilaah oo neceb walaalkiis, kaas oo beenaale ah. Waayo, kan aan jeclayn walaalkiis oo uu arko, sidee buu u jeclaan karaa Ilaah uusan arkin? (1 Yooxanaa 4,20: 21). Waxay i xasuusineysaa dhalleeceynta naxariis darrada ee Ishacaa ee kuwa ku cibaadeysta cibaadada isla markaana ku dhaqma cadaalad darro xagga bulshada ah:
Maxaan ku sameeyaa tirada dhibbanayaashaaga? ayaa Rabbigu leeyahay. Waan ka dhergay allabari la gubo oo wananka iyo baruurtoodhyada dibidaha, iyo weliba baraarka, iyo baraarka, iyo oryaha, Markaad u timaadid inaad i hor istaagto, bal yaa weyddiista inaad wejigayga hortiisa i burburinayso? Mar dambe ha bixinina qurbaannada hadhuudhka ah oo aan waxtar lahayn! Fooxa waa karaahiyo aniga. Bilaha cusub iyo sabtiyada, markaad isu timaadaan, Ma jecli xanaaq iyo isu imaatinno ciidaha! Naftaydu waxay col ku tahay bilaha cusub iyo ciidaha sannadlaha ah; Iyagu waa culayskayga, kolleyse waan daalay. Oo xataa haddaad gacmihiinna fidiso, indhahayga waan ka qarin doonaa, Haddaad wax badan tukatid, ku maqli maayo. maxaa yeelay gacmahaagu dhiig buu ka buuxa » (Ishacyaah 1,11: 15).
Illaa iyo sida aan ognahay, ma jirin wax laga cawdo maalmihii dadkan la qabtay, nooca fooxa, ama xayawaanka ay allabari u bixiyaan. Dhibaatadu waxay ahayd habka ay ku noolaayeen waqtiga intiisa kale. Wuxuu yidhi: "Gacmahaagu dhiig ayuu ku daboolan yahay"
Wuxuu ku baaqay xalka guud: "Ka tag xumaanta, barta wanaagga samee, caddaalad doonso, caawiya kuwa la dulmay, agoonta ka dhig xaq, oo carmallada u horseed!" (Aayadaha 16aad). Waxay ku qasbanaadeen inay hagaajiyaan xidhiidhka ka dhexeeya shaqsiyadooda dhexdooda. Waxay ku qasbanaadeen inay tirtiraan midab takoorka, dhaqan xumada bulshada dhexdeeda ah iyo dhaqamada dhaqaale ee aan cadaalad aheyn.
5. Nolosha oo dhan
Cibaadada, haddii ay dhab noqoto, waa inay isbedel ku samaysaa sida aan isula dhaqanno toddobada maalmood ee usbuucii. Tani waa mabda'a kale oo aan ku aragno Qorniinka.
Sidee ayaan u caabudaynaa? Mic ayaa weydiinaya su’aashan wuxuuna na siinayaa jawaabta:
Oo maxaan Rabbiga u soo dhowaanayaa, Oo aan ku hor sujuudaa Ilaaha ugu sarreeya? Ma ula tagaa dhibanayaashii gubtay iyo weylihii sanadlaha ahaa? Rabbigu ma ku farxi doonaa kun kun oo wanan, iyo durdurro saliid ah? Xadgudubkayga aawadiis miyaan curadkayga u bixiyaa? Nin yahow, waxaa laguu sheegay waxa wanaagsan oo ah waxa Rabbigu kaa doondoono, ee ah inaad ereyga Ilaah dhawrtid, oo aad jacaylkaaga jeclaatid oo aad isku hoosaysiiso Ilaahaaga hortiisa » (Wed 6,6-8).
Hoosheeca sidoo kale wuxuu ku nuuxnuuxsaday in cilaaqaadka ka dhexeeya shaqsiyaadku ay ka muhiimsan yihiin farsamooyinka cibaadada. "Sababtoo ah waxaan ku raaxaystaa jacayl ee ma aha allabari, aqoonta Ilaah ee ma aha dhibbanaha gubtay." Looguma yeedhin oo keliya in la ammaano, laakiin sidoo kale loogu yeedho shaqooyinka wanaagsan (Efesos 2,10).
Fikirkayagu cibaadadu waa inuu dhaafo muusig iyo maalmo dhaafsiisan. Faahfaahintaani kuma dhowaad ahaan kuwo muhiim ah sida nolosheenna. Waa munaafaqnimo in la dhowro Sabtida iyadoo la beero midnimo dhex mara dadka walaalaha ah. Waa munaafaqnimo in la heeso oo keliya sababaha oo loo diido cibaadada sida ay u sharraxaan. Waa munaafiqnimo in lagu faano dabaaldega Isirnimada oo tusaale u ah is-hoosaysiinta. Waa munaafiqnimo in loogu yeedho ciise Sayid hadaanan raadsan xaqnimadiisa iyo naxariistiisa.
Cibaadada ayaa aad uga badan ficillada banaanka - waxay ku lug leedahay isbadal guud ee dhaqamadeena taasoo ka dhalatay is badal wadnaha ku yimid, isbadal uu ku yimid Ruuxa Quduuska ah ee nagu jira. Si aan u bedelno isbeddelkan, waxaan u baahan nahay rabitaankeenna ah inaan waqti la qaadanno Ilaah baryada, barashada, iyo edbinta kale ee ruuxiga ah. Isbeddelkani kuma dhaco eray sixir ama biyo sixir - waxay dhacdaa iyadoo waqti la qaato oo lala yeesho Ilaah.
Aragtida dheer ee Bawlos ee cibaadada
Cibaadada ayaa nolosheena oo dhan wada. Tani waxaan ku aragnaa tan gaar ahaan ereyada Bawlos. Bawlos ereyga ereyga iyo cibaadada wuu adeegsaday (Cibaadada) sidan oo kale: «Haddaba, walaalayaalow, waxaan idinku baryayaa naxariistii jannada, waxaan idinka baryayaa inaad jidhkiinna u bixisaan sida allabari nool oo quduus ah oo Ilaah ka farxiya. Taasi waa adeegaaga cibaadada caqliga leh » (Rooma 12,1). Nolosha oo dhami waa inay ahaato cibaado, ma aha saacado kooban toddobaad kasta. Dabcan, haddii nolosheena loo hibeeyo cibaadada, waxaa hubaal ah inay ku jiraan saacado kooban Masiixiyiinta kale toddobaad kasta!
Bawlos wuxuu adeegsaday ereyo kale oo loogu talagalay allabari iyo caabudid Rooma 15,16 markii uu ka hadlayo nimcadii uu Eebbe siiyay (si aan u noqdo midiidinka Ciise Masiix ee quruumaha dhexdooda, si aan wadaaddadii injiilka Ilaah ugu wacdiyo, si dadka aan Yuhuudda ahayn) Noqo dhibbane Ilaah ka farxiya, oo quduus lagaga dhigay Ruuxa Quduuska ah. Halkan waxaan ku aragnaa in wacdinta injiilka uu yahay qaab cibaado.
Maaddaama aan dhammaanteen wadaaddo nahay, dhammaanteen waxaan leenahay door wadaadnimo si aan u sheegno faa'iidooyinka kuwa noogu yeedhay (1 Butros 2,9) - adeeg cibaado oo xubin walba uu ka qeybqaadan karo, ama ugu yaraan ka qeybqaadan karo, iyadoo la kaalmaynayo dadka kale injiilka.
Markuu Bawlos uga mahadnaqay Filiboy sida ay ugu soo direen taageero maaliyadeed, wuxuu adeegsaday ereyada cibaadada: "Waxaan ka helay Epafroditus waxa aad ka heshay: caraf qurxoon, allabari wanaagsan, Ilaah ka farxiya" (Filiboy 4,18).
Caawinaad dhaqaale oo aan siinno Masiixiyiinta kale waxay noqon kartaa qaab cibaado. Cibraaniyada 13 ayaa qeexaya cibaadada, taas oo ku dhacda ereyada iyo shaqooyinka: "Marka haddeer aan had iyo goor Ilaah ugu mahadnaqno, waa midhaha bushimaha bushimaha qirta magiciisa. Ha iloobin inaad wanaag sameyso oo aad dadka kale la wadaagtid; waayo, allabaryada caynkaas ah Ilaah ha ka farxiyo » (Aayadaha 15aad).
Haddii aan fahamsanahay cibaadada inay tahay dariiqa nolosha oo ay kujirto addeecista maalinlaha ah, salaadda, iyo daraasadda, waxaan u maleynayaa inaan haysanno aragti fiican marka aan eegno su'aasha muusikada iyo maalmaha. In kasta oo muusigu qayb muhiim ah ka ahaa cibaadada, ugu yaraan ilaa wakhtigii Daa'uud, muusiggu ma aha qaybta ugu muhiimsan ee cibaadada.
Sidoo kale, xitaa Axdigii Hore wuxuu aqoonsan yahay in maalinta cibaadada aysan muhiim u aheyn sida aan ula dhaqmeyno kan xiga. Axdiga cusub uma baahna maalin cayiman cibaadada, laakiin wuxuu u baahan yahay camal ficil oo jacayl ah oo midba midka kale u jeclaado. Wuxuu dalbanayaa inaan soo ururino, laakiin isagu ma yiraahdo goorta aan ururinno.
Saaxiibbada, waxaa naloogu yeedhay inaan caabudno, dabaaldego, oo aan Ilaah weyneenno. Farxad bay noo tahay inaanu sheegno faa'idadiisa, inaanu injiilka la wadaagno wixii uu noogu sameeyey gudaha iyo xagga Rabbigeenna ah Badbaadiyeheenna Ciise Masiix.